Ny fahaizan'i Vicente Romero mofomamy | Famoronana an-tserasera
Raha afaka naka hazavana toa ny olon-kafa i Joaquín Sorolla, afaka nilaza isika fa i Vicente Romero dia misambotra ny tontolo iainana amin'ny asany amin'ny fomba saika mbola tsy nisy toy izany. Ny fahatsapana ny haavon'ny hamandoana na ny fahamainana amin'ny masoandro milatsaka amin'ny filentehan'ny masoandro dia mamelombelona ireo fahatsapana azo rehefa ny iray dia mandrisika amin'ny fandinihana ny mofomamy tsirairay avy.
Romero mamela antsika ny dian'izy ireo amin'ny asany tsirairay avy saika te-hanakaiky kokoa an'io lavarangana io izay hijeren'ilay vehivavy mipetraka ny manodidina azy miaraka amin'ny tongony mihohoka kely amin'ny seza. Andian-dahatsoratra izay angoninay avy amin'ireto andalana ireto hanandrana hampita ny fahasarotan'ny fakana tontolo iainana toa izay mitranga amin'ny ankamaroan'ny sangan'ity artista espaniola ity.
Vicente Romero koa mikasika ny hazavana amin'ny jeneraly mahagaga amin'ny sasany amin'ireo sanganasany toa ny pastel Canson i-Tientes 2015 amin'ny taratasy izay anananao etsy ambany. Fitsaboana mahafinaritra sy tanana miaraka amina teknika tsy mampino izay saika hamamo iray.
Tsy hilaza na inona na inona momba ny anao izahay fitiavana ny vehivavy vavy Izy io dia maneho amin'ny fomba saika anjely fa tena misy amin'izao androntsika izao izay andehanantsika manatrika bebe kokoa ny fahalotoam-pitondrantena sy ny fomba ratsy amin'ny tranga sasany. Vehivavy hajaina, tsotra sy manetry tena amin'ny toerany ary manaja an'i Romero amin'ny fomba toy izany.
Painter teraka tany Madrid tamin'ny 1956 ary izany dia izao mampianatra Fine Arts ao amin'ny Faculty of San Fernando any Madrid. Matetika izy no manome atrikasa amin'ny studio sasany, toy ny nitranga volana lasa izay Hellas Art Studio izay nandaniako taona vitsivitsy niasana. Afaka manaraka azy hatrany ianao ny facebook-nao hihaino tsara ireo sanganasa vaovao, fampirantiany ary atrikasa toa ilay voalaza etsy ambony.
Mpanakanto hosodoko sy mpanakanto miavaka izay harahinay avy amin'ireto andalana ireto amin'ny fotoana maro kokoa ary iza manolotra fifehezana lehibe miaraka amin'ny mofomamy. Raha mitady ny jiro ianao dia tohizo ho an'ity fidirana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny mofomamy sy ilay vehivavy amin'ny asa miavaka an'i Vicente Romero